Ibali likaGian Carlo Menotti's First Opera
I-Consul yaqulunqwa nguGian Carlo Menotti kwaye yaqala ukuqala ngo-Matshi 1, 1950, e-Philadelphia, ePennsylvania. Kuya kuqhubeka ukuphumelela ibhaso leNew York Drama Critic Circle njengomdlalo oPhambili weMidlalo ka-1950. Kuya kufumana iMonotti yePulitzer Prize. I-opera iyenzeka kwilizwe elingabonakaliyo lizwe laseYurophu.
I-Consul, UMTHETHO 1
Ekuhambeni kwipolisa eyimfihlo, uJohn Sorel ophikisanayo uyayenza ikhaya ngaphandle kokufakwa. Ngexesha elincinane lokulibazisa, umfazi kaJohn uMagda nonina bakhawuleza ukumfihla. Ngokukhawuleza, ukunqonkqova kuvelelwe emnyango kwaye amapolisa aqhubela ekhaya ukuze afune uYohn. Benza indlela yabo ngendlu, kwaye ngokubulela, ikhefu ayiluncedo. UJohn uphuma kwindawo yakhe yokucasha aze achaze izicwangciso zakhe zokufumana ukhuseleko: Magda kufuneka afake isicelo se-visa ukuze ashiye ilizwe. Kanye uMagda, umntwana wabo, nonina baye bawela umda ngokuphepha, uYohn uya kubajoyina. Okwangoku, uya kusinda emngceleni wemida apho uya kuzifihla aze alinde ukuba zifike.
UMagda ungena kwiofisi ye-consul kuphela ukufumana iqela elikhulu labantu elinde ukufumana ii-visa zabo. Uyenzela ukuba ahambe ngendlela yesihlwele esedeni phambi kwaye uzalise isicelo se-visa. Emva kokuba ebeka iphepha kumabhalana, ujika aze ahlangane nabo bonke abafake izicelo. Unobhala ubuthelela ingqwalasela yomntu wonke aze amemezele ukuba akaqinisekanga ukuba nabani na oya kufumana i-visa zabo.
I-Consul, UMTHETHO 2
Umntwana kaJohn noMagda ugula. Ngethuba ekhaya, unina kaYohane uhlabelela i-lullaby ukuthuzela umntwana. UMagda uhambelana neqela lamapolisa azama ukukhipha ulwazi oluninzi malunga noJohane nabalingani bakhe ngokusemandleni, kodwa uMagda uhlala engagxininiswa kwaye wenqaba ukuphendula nayiphi na imibuzo yabo. Okwangoku, uJohn, oye walinda ekufihla ngasemngceleni, uthumela ileta kuMagda emcela ukuba akhangele kwaye athole i-visa.
UMadga ubuyela kwi-consulate enethemba lokufumana i-visa yabo efunekayo kakhulu. Njengoko ejongene nomgca, umlindi olindele i-visa yakhe uqala ukwenza amaqhinga emilingo, enethemba lokumangalisa unobhala aze athole umusa ekufumaneni isicelo sakhe. Uyenza isimiso esichengileyo esinobuninzi beendawo zokuhlala bekholelwa ukuba bayabhola. Unobhala uphela ukwesaba ngakumbi kunokuba uchukumise kodwa uyavuma ukuba uya kumbona xa umveleli obalulekileyo sele eqedile ishishini lakhe. Kubonakala ukuba le ndwendwe ebalulekileyo yindoda yamapolisa. Xa uMagda ebona ebonakala, uloyika ngakumbi.
I-Consul , UMTHETHO 3
Iinyanga zihamba kunye noMntwana kaMagda nomama-mkhwenkwe baphele. UMagda ungena kwiiofisi zee-consulate kwakhona. Ngethuba apho, ufumanisa ukuba uYohn uceba ukubuyela kuye naphezu kweengozi. UMagda akakwazi ukunyamekela ukulahlekelwa ngumyeni wakhe, ngoko ujika kwiingcinga zokuzibulala kwaye unquma ukuya ekhaya. Ukuba ufile, uYohane akayi kuba nesidingo sokubeka umngcipheko ubomi bakhe. Amaxesha ngaphambi kokuba i-consulate ivale ngokuhlwa, uJohn uphuphuma ngeengcango kunye namapolisa ekulandelelana kungekudala. Xa bemthabatha kwi-ofisi ye-consul, unobhala unomdla uzama ukuthetha noMagda kwifowuni.
UMagda usemnyama kakhulu ngengqondo, elahlekelwe ngumntanakhe, umkhwekazi, kunye nokuthembeka, nendoda yakhe, nangona ephila. Uye wazama konke akwaziyo ukufumana i-visa yakhe, kodwa ngexesha elininzi lidlulile ngaphandle kokuqhubela phambili kwinkqubo yesicelo, uMadga akakwazi ukubona ukukhanya ekupheleni kwetoni. Uya ekhitshini lakhe kwaye ajika kwi-oven yegesi ngenjongo yokuzibulala. Okwangoku, ifowuni yakhe ibhala kunye namacenge njengoko unobhala ezama ukufikelela kuye.
Rigoletto kaVerdi ,
UHansel noGretel Opera Synopsis
I-Flying Dutchman Synopsis
Imfazwe YaseMerika Yomhlaba: Ukungqingwa kwePort Hudson
Ukutyelela iSixeko saseQuebec: Imbali elula yesiFrentshi neNgesiNgesi
Iindlela ezili-10 eziphezulu zokusebenzisana noTitshala wokutsha
IiRekhodi zehlabathi ze-400-Meter Women
Iingqungquthela eziBalulekileyo ezingamaBeautiful
Yonke NgesiRashiya Umfanekiso wokukrazula
Ukuxhasa Abafundi beZikolo eziPhakamileyo ngeDyslexia